Daawo Madaxweyne Farmaajo Oo Ogolaaday Soomaaliya Ay Hoos Tagto Dalka Itoobya & Maxaa Sababay Arinkaa.
November 10, 2018 puntlandnews
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in Geeska Afrika ay yeelan doonaan hal madaxweyne halka ay hadda maamulaan Saddex Madaxweyne xilli uu qudbad ka jeedinayay munaasabad lagu furayay isbitaal magaalada Bahir Dar.
Xilliga uu qudbada jeedinayay ayaa waxaa goob joog ka ahaa Madaxweynayaasha wadamada Soomaaliya iyo Eritrea oo ka qeybgalay shir saddex geesood ah oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Bahir Dar.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaan cadeyn xilliga ay midoobi doonaan saddexdan dal balse waxa uu sheegay”Mustaqbalka”
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa soo gabagabeeyey booqashada uu ku joogay dalka Itoobiya, Madaxweynaha oo booqashadiisa maalinta shalay uga billaabatay magaalada Gonder waxuu shir seddex geesood ah oo ku saabsan danaha seddexda dal ee Soomaaliya, Ereteria iyo Itoobiya kala yeeshay Ra’isulwasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed iyo Madaxweynaha Eritrea Isaayas Afwarqi,madaxweyne farmaajo ayaan wali cadeyn hadalka ka uu yiri Reysalwasaaraha dalka itoobiya.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed CabdulaahI Farmaajo iyo Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa soo gabagabeeyay booqashadii ay ku joogeen dalka Itoobiya
Maxaad uga jeedaa Somalia ay hoostagto Dalka Ethiopia.
Somali Ogadeen miyaad uga jeedaa.
Waa Marin habow , San dhici doonin.
Waxaan aad ka hadlaysaan dhamaan was maslsxada Ethiopia Masha mid shacab kale,
Waxay sababin Xukun ciidan, iyo u dhaqaynta dadka iyo dalka iyo Xuduuda umadda Somalia.
Farmajo is casil into aan lagu casilin.
Ethiopia was dal cadaw ah oo tuugo Raadin, danta Somalia kuma jirto meesha,
Ethiopia waa 100 million oo doonin Dhirta inay jartaan, wax alla waxa Somalia leedahay inay burburiyaan, Masha dad is qaadankara aka laysu soon dhawayn karo.
Ethiopia waxay lasoo heshiisay 10 jeer Amxaarka ereteria so Somalia weerar qarsoon loogu soon qaado.
FG waxay ubaahantahay Madaxwayne so deg deg ah.
We mafaxwayne cusub doorta.
RW Ethiopia was tuug, dad Ethiopia wada, waxa Areteria iyo Ethiopia u heshiiyeen waa dalka Somalia.
Geeska Afrika dadka iyo dalalka Ku nool isma qaadan karaan, Sinah, marnah.
Somalia waxay ubaahantahay Siyaasi run ah, OK ilaaliya, dadka iyo dalka iyo khayraafkiisa ee Somaliya
Ethiopia iyo Aretereya waxay u heshiiyeen inay Somalia xadaan, Oo boobaan oo sogaliyaan Amxaaro iyo Areteria, Farmajo was LA sumeeyey, waxaana loo sheegay figrad dhac iyo tuugo jabhadaha Oromada iyo Eriteriya Ku soon heshiiyeen.
Shacabka Somalia lama soo galikaro, waxuuna ubaahan yahay ilaalinta dadka, dalka iyo khayraad Somaliyeed.
Somalia ma jirto wax at ka raadin OK usoo dhawaysan Amxaaro iyo Areteria OK in LA dhaco OK LA xado oo LA boobo umadda somaliya aan ahayn
Fiiri Arintaan khatartaa.
Ethiopia waxay Ku fakartay inay bad hesho—-waxay aragtay dagaalada Somalia dhexdeeda lava wado iyo kala firiirsanaanta shacabka somalia—–waxay sogadatay maraakiib iyada oo aan bad lahayn—– waxay shir LA qaadatay China inay Ethiopia u dhisto Saldhig Ciidan oo laga dhiso Biyaha Caalamiga ah we Badda India—- waxay LA heshiisay Ereteria—-Ciidanka Ethiopia hugaamiyaha ninja u ah wuxuu shaaciyey Dadka Ethiopia kabadan 100 million , inaysan bad lahayn Masha suuro gal——waxay LA kulantay Madaxda Somalia iyo Ereteria— Ethiopia waxay miiska soo saartay in Ethiopia, Somalia iyo Areteria aysan yeelan Karin 3 madaxwayne oo half madaxwane loo Bashan yahay.
Arintanu was arin burcadnimo oo Ku wajahan Somalia Bad iyo Biri.
Ereteria iyo Ethiopia waxay Ku heshiiyeen dhalinta arintaan iyo in Somalia LA boobo
Waxaan kula talin shacabka Somalia:
1. Kasaar somalia cidkasta oo Ethiopia u dhalatay
2. Jooji colaada Somalia dhexdeeda
3. Dhis Ciidankaaga Bad iyo Biri oo karti yeelo
4. Did oo sicad u diid wax kasta oo dhalin Ku xad gudub dustuurka shacabka somalia
Dad iyo dal iyo waxkasta oo Ku saabsan saldhig Ethiopia Ku yeelato Badda India.
5. Ethiopia Was dal Cadaw ah, dhaqdhaqaaqa ay wadaana was cadaawad Ku wajahan Somalia Bad iyo Biri
Ethiopia waa burcad,
Somalidu waa in ay midowdaa, oo ka hortagtaa Cadaw Ethiopia iyo hanqaltaaga ay ka wado Somalia.
RW Ethiopia waa dalanbabi habow San , haduu isgaliyey in 100 Million khayraadka shacabka Somalia boobaan, iyagoo data Mooryaanta Eriteria.
Somalia waa in at Ethiopia ka sifaysaa dalkeeda, oo aan marna amxaaro loo ogolaan
Aduunku ma ogola argagixiso loo maara waayey, in ay hooy ka dhigato Somaliya. Waa cadaan in la ogadey Somaliyi in aysan ismaamuli karin, degaankooda Somaliya Jecleyn , dad wadaniyiin ah aheyn, la gu sureeyo in aaney laheynba wadanka, sida ay u duminayaan. markaa wey imaaneysaa in ay timaado in lagala wareego ee ay yimaadaan wadankaan dad ehel u ah. Somali ma aha dad wadankaan ehel u noqon kara.